Yaa sameeynaya xisaabinta Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Sharciga Yaa sameeynaya sexting?
Sexting, iswada, dharka iyo lebbiska ayaa badanaa lala xidhiidhiyaa shabakad adag. Soo dirista isutaga maskaxdu waa qeyb ka mid ah tiknoolijiyada loo adeegsado tiknoolajiyada dhalinyarada ah ee maanta, laakiin waxay u horseedi kartaa in lagu soo wargeliyo booliiska oo gashanaayo xogtooda.
Gabdhaha waxaa si weyn u saameeya dhaqanka 'caajis' caan ah oo kor u qaadaya muusikada haweenka leh, iyagoo xiran kabaha dhar xidhka iyo iyagoo jahawareer ku ah habka kacsan ee galmada. Ragga ayaa si khaas ah u labisan dharka caadiga ah ee ku jira sifududka awoodda. Inta badan haweenka caanka ah iyo xiddigaha porno waxay leeyihiin bogag gaar ah.
Isticmaalka taleefannada casriga ah, haween badan oo dhalinyaro badani waxay ku daydaan muuqaalkan galmada waxayna u diraan saaxiibo mustaqbal ah oo rajo leh inay soo jiitaan dareenadooda. Wiilasha sidoo kale waxay u diraan sawirro aan qarsoodi lahayn oo sawirro qaawan oo 'jewel tufaax' ah iyagoo rajeynaya inay ku farxaan gabdhaha.
Daraasaduhu waxay soo tebiyeen in dhalinyaro badan ay waydiisanayaan, ama xataa xayiraad, dumarka da'da yar inay u diraan sawiro noocaas ah. Markii hore wiilasha dhalinyarada ah ayaa laga yaabaa inay baddaleen dhashay wargeysyada, isbeddelka maanta waa in la sawiro sawirrada gabdhaha qaawan, gaar ahaan asxaabta dugsiga.
Qaar ka mid ah ragga dhallinyarada ah waxaa hubaal ah in lagu xukumay haysashada 'filimada carruurta' sababtoo ah haysashada shakhsiyaadka erotic ah ee ka soo jeeda gabdhaha aan dhalan. Hase yeeshee inta badan xukunka ayaa ah ragga waaweyn. Ragga waaweyn ee qaangaarka ah waxay ku dhow yihiin inay u muuqdaan kuwo yaryar oo ku dhiirri-galiya gabdhaha in ay u soo diraan isku-ururinta ama qaawan-is-qabsiga. Waxay badanaa ku galaan qolalka sheekaysiga iyo bogag internetka ah oo ay la jiraan rajo ay ku qabaan aaminaad iyo isku-kalsooni ku filan inay ku qanciyaan inay la kulmaan oo ay galmo la yeeshaan iyaga oo aan ogolaansho waalid. Xaaladda xaaladdoodu ka sii darnayd, waxay u arkaan aragtida ah in ay afduubtaan.
Istaraatiijiyadaha xariirka ah waxaa ka mid ah in laga helo macluumaadka shakhsiyeed ee qofka dhalinyarada ah ee ay markaas isticmaalaan iyaga, iyaga oo u hanjabaya waalidkood haddii aysan oggolaan inay la kulmaan iyaga oo u jihaysan jinsi ahaan.
Cilmi-baadhista ku saabsan dembiilayaasha galmoodka carruurta ayaa muujinaya in nimankan duqoobay badanaa ay leeyihiin waxa loogu yeero "garashada dhalashada." Taasi waa diidmada ku saabsan jihada dhaqankooda ama raadineysa inay ku eedeeyaan cunugga si ay u ilaaliyaan waayeelka iyo sidaas darteed noqoshada dacaayad.
Tani waa hagaha guud ee sharciga mana ka kooban yahay talo sharci.
<< Galmada galmada sida ku xusan Sharciga England, Wales & NI Aargoosi Porno >>